Ungazithenga njani iZimvo zikaYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazithenga njani izimvo kwiYouTube?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 439
Abasebenzisi abaninzi bamasango Kwiwebhu YouTube Bafuna ukutsiba kwisitishi sabo kwaye bafumane impumelelo abayifunayo. Ukufezekisa le njongo akukho mfuneko yokuba ulinde iividiyo ezili-100, kuba ungathenga utyelelo kwiividiyo zeYou Tube.
Ukwandisa utyelelo kwiividiyo zeYouTube, umxholo weevidiyo ezimanyelwayo kufuneka ubandakanywe ukuze zibe nomtsalane kwabanye abasebenzisi boku platform kwaye zibonwa linani elikhulu labantu.
Abanye abasebenzisi banokuziva baphoxekile kwaye nokuba banokufaka iividiyo ezininzi, abanakho ukubeka ijelo labo kwi-You Tube, ngenxa yokungabikho kotyelelo. Le yimeko abantu abaninzi abaye bahlangabezana nayo kwaye ibenza bazive ngathi bachitha ixesha kunye nabo iividiyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, indalo yeqonga leYou Tube ikhula mihla le kwaye uninzi lwayo abasebenzisi abafuni kushiyeka ngasemva. Wena Tube unezigidi zabasebenzisi ababhalisiweyo kwihlabathi liphela, elimele inkuthazo enkulu yokulayisha iividiyo ezisemgangathweni, kodwa zikwabonile.
Ityhubhu yakho yomelezwa njengezibuko lewebhu lomxholo wee-audiovisual
Wena Tube yinethiwekhi yokuncokola nenani elikhulu labasebenzisi, elityhila amandla alo kwihlabathi le- IT. Ukongeza, abantu abaninzi bakhetha ukubukela iividiyo. onlineNgomabonwakude omele inkuthazo. Kule portal Kwiwebhu izigidi zeevidiyo zijongwa yonke imihla.
Kwelinye icala, inani leeyure ozichitha kubasebenzisi beTyhubhu ubukele iividiyo zikhula rhoqo ngonyaka, kuzo zombini iifayile ze- khomputha, njengakwizixhobo eziphathwayo. Uninzi lweeyure zomxholo zilayishwa kule portal mihla le.
Amanye amaqonga anikezela ngeenkonzo zokubonakala kweTyhubhu kwaye uninzi lwazo lwenzelwe ukuqhuba Ukusebenzisana phakathi kwabasebenzisi. Ngale ndlela, abo bafaka iividiyo ku-You Tube banokubonisa izakhono kunye neetalente zabo kwi-Intanethi kwiindawo ezahlukeneyo, ezinje ngomculo, ukubhaka, ezemidlalo, ukhenketho, izilwanyana zasekhaya, umhombiso okanye izithambiso, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Iindlela ezahlukeneyo zeTyhubhu kunye nokukhula kwi-intanethi
Abanye abasebenzisi be-You Tube banomdla okhethekileyo wokuma ngaphandle kwiintlobo ezahlukeneyo zamacandelo omxholo wokumamela; Umzekelo, iChef de Cuisine inokuba nomdla wokufumana utyelelo oluninzi kwisitishi sepheki, kodwa nakwenye indawo yokutya iMeditera. Kule meko, baya kubhenela ku izicelo ebavumela ukuba bafumane iimbono zeevidiyo zeTyhu Tube.
Ukuthenga utyelelo kwi-You Tube kunceda ukuphucula ukubekwa, ukufumana iziphumo ezingcono, ngakumbi ukuthandwa kunye nengeniso yezoqoqosho, kuxhomekeke kumdla womsebenzisi ngamnye ofaka iividiyo kuleqonga le-Intanethi.
Ukutyelelwa ngakumbi kunye nabalandeli kwi-You Tube
Ukonyuka kokundwendwela iividiyo zamasango Kwiwebhu Wena Tube ikuvumela ukuba ube mdala abalandeli. Ngenxa yoku, abasebenzisi baya kwenza amagqabantshintshi ahlukeneyo, aya kuthi anyuse ukuthembela kubaphulaphuli abatsha abenziweyo.
1 Ityhubhu yakho yomelezwa njengezibuko lewebhu lomxholo wee-audiovisual
2 Iindlela ezahlukeneyo zeTyhubhu kunye nokukhula kwi-intanethi
3 Ukutyelelwa ngakumbi kunye nabalandeli kwi-You Tube
Indlela yokufumana abalandeli kwiYouTube?